အမေရိက ဈေးကွက် အတွင်း ရောက်ရှိလာဖို့ တွေဝေနေရပြီဖြစ်သည့် Peugeot ! – MyMedia Myanmar
အမေရိက ဈေးကွက် အတွင်း ရောက်ရှိလာဖို့ တွေဝေနေရပြီဖြစ်သည့် Peugeot !
အမေရိက ဈေးကွက် အတွင်းမှာ Peugeot အမျိုးအစားကို ရောင်းချ လာနိုင်ခဲ့တာ နှစ်ပေါင်း ၃၀ လောက်ကို ကြာမြင့်ခဲ့ပါပြီ။ တစ်ချို့ အတည်မပြုနိုင်သေးတဲ့ သတင်းတွေကတော့ PSA အဖွဲ့ အနေနဲ့ Peugeot ကို လာမယ့် ၂၀၂၃ လောက်မှာ အမေရိက ဈေးကွက်အ တွင်း တစ်ဖန် ပြန်လည် ရှင်သန် လာစေဖို့ အလို ရှိနေတယ်လို့လည်း ဖော်ပြနေကြပြန်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ ကပ်ရောဂါရဲ့ ရိုက်ခတ် မှု ကလွဲလို့ ပြီးခဲ့တဲ့ ဩဂုတ် လအတွင်းက အထိ အခု အစီအစဉ်တွေက ဆက်လက် အလုပ် ဖြစ်နေသေးပြီး Peugeot ရဲ့ လာမယ့်နှစ် အနည်းငယ်အတွင်း အမေရိက ဈေးကွက်ကို ရောက်ရှိလာနိုင်ခြေ ‌ရှိနေသေးတာ ဖြစ်တယ် လို့ PSA မြောက် အမေရိကရဲ့ ဥက္ကဌ ဖြစ်သူ Larry Dominique က ဆိုထားခဲ့ ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း Automotive News Europe ရဲ့ ဖော်ပြချက်မှာတော့ မကြာသေး မီကမှ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေ ရှိခဲ့ကြ တဲ့ Fiat Chrysler Automobiles နဲ့ Groupe PSA တို့ အကြားက Stellantis ဆိုင်ရာ ကိစ္စတွေကြောင့်ပဲ Peugeot ရဲ့ CEO Jean-Philippe Imparato ကိုယ်တိုင် ကိုက အမေရိက ဈေးကွက် အတွင်း တစ်ဖန် ဝင် ရောက်ဖို့ အစီအစဉ် ကို ပြန်လည် စဉ်းစားနေခဲ့ရပြီ ဖြစ်တယ် လို့လည်း သိရပါတယ်။
Groupe PSA အနေနဲ့ ကတော့ Opel ၊ Citroen နဲ့ DS Auto တို့ကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလို ပေါင်းစည်း လိုက် မယ့် ကုမ္ပဏီ ဖြစ်တဲ့ Stellantis ရဲ့ CEO နေရာ ကိုတော့ Tavares က တာဝန်ယူ လာနိုင်ခြေရှိ နေပြီး အဆိုပါ အဖွဲ့ ထဲမှာ FCA ရဲ့ Jeep ၊ Ram ၊ Dodge နဲ့ Chrysler Brand တွေလည်း ပါဝင်လာမှာပါ။ Imparato ရဲ့ ပြောကြားချက် အရတော့ Stellantis ကိစ္စ မတိုင်ခင် လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်နှစ် ခွဲ ကာလ လောက်ကတည်းက Peugeot ရဲ့ အမေရိကသို့ ပြန်လည် ဝင်ရောက် ရေးကိစ္စတွေကို ဆွေး နွေး နေတာ ဖြစ်တယ် လို့လည်း သိရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ၎င်း က ဆက်လက် ပြောကြားရာမှာတော့ လာမယ့် ရက် ပိုင်းတွေမှာ Peugeot အနေနဲ့ ကမ္ဘာသစ်တစ်ခု ရဲ့ အစိတ်အပိုင်း တစ်ရပ် ဖြစ်လာ မလား ဆိုတာကို အတိအကျ မပြောနိုင် သေးပေမယ့် လာ မယ့် လပိုင်းလောက်မှာတော့ ပြောင်းလဲ လာမယ့် နည်းဗျူဟာ တွေနဲ့ အညီ Peugeot အပါအဝင် အခြား သောအရာ တွေကို ပြန်လည် သုံးသပ် ပြင်ဆင်တာ တွေပြုလုပ် ရတော့မယ်လို့ ဆိုသွား ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Peugeot ဟာ အမေရိကကို ပြန်လည် ဝင်ရောက်လာ မယ် ဆိုရင်တောင်မှ Overlap Brand တစ်ခု အနေနဲ့ ဝင်ရောက်ချင်မှာ မဟုတ်ဘူး လို့ လည်း Imparato က ဆိုထား ပါသေး တယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ဖြစ်နိုင်ချေတွေ ကို လျှော့ တွက်လို့ မရသေးတာ ကြောင့် အခု ကိစ္စ ဟာအနာဂါတ် အတွက် ဆက်လက် ဆွေးနွေးတိုင်ပင် နေဆဲ အဆင့် လို့ပဲ မှတ်ယူ ရနိုင်ပါတယ်။ တကယ် တော့ အမေရိက ဈေးကွက် အတွင်း ကို ပြန်လည် ဝင်ရောက် ဖို့ ကြိုးစားတဲ့ အပိုင်းဟာ ပြင်သစ် နာမည် ကြီး ကား ကုမ္ပဏီ Peugeot အတွက်ကတော့ အန္တရာယ်များတဲ့ အရွေ့တစ်ခု ဖြစ်လာ နိုင်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အခန့် မသင့် ရင် အခု အီတလီ ကားထုတ်လုပ် ရေး ဖြစ်တဲ့ Fiat ရဲ့ ကြုံတွေ့ နေရတဲ့ အခြေအနေ လိုမျိုး လည်း ရင်ဆိုင် ရနိုင် ပါသေးတယ်။ လက်ရှိ အမေရိက ဈေးကွက် အတွင်းမှာ Fiat ရဲ့ ရောင်းအားတွေ က အတော်လေးကို ထိုးကျ နေ ခဲ့ တာ ဖြစ်ပြီး 500 Hatchback ၊ 500 L နဲ့ 124 Roadster တို့ ဆိုရင် ဆက်လက် မထုတ်လုပ် နိုင်တော့ပဲ 500 X တစ်မျိုးတည်းသာ လျှင် အမေရိက ဈေးကွက် အတွင်း ကျန်ရှိတော့တဲ့ အခြေအနေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ Peugeot အနေနဲ့ အမေရိက ‌ဈေးကွက် အတွင်း ကို ဝင် ရောက်လာခဲ့မယ် ဆိုရင်တောင် ဘယ်လို ကားမော်ဒယ်မျိုးတွေကို ရွေးချယ် ရောင်းချ သွားမှာ လည်း ဆိုတာ မခန့် မှန်းနိုင်သေး ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် PSA Group ရဲ့ သုတေသန တွေ အရတော့ Peugeot ရဲ့ 3008 Crossover ဟာ အကောင်းဆုံး ဖြစ် လာနိုင်ပြီး အမေရိကဈေးကွက် အတွက်လည်း သင့်တော် နိုင်မယ်လို့ လည်း ယူဆထားပါတယ်။ တစ်ဖက်မှာလည်း Stellantis ဆိုတဲ့ နာမည် နဲ့ အဖွဲ့ အသစ်ဟာ Peugeot Brand အောက်မှာပဲ အမေရိက ဈေးကွက် အတွက် ကို ထူးခြား တဲ့ ကားအသစ် တွေ ရောင်းချ ပေးဦး မှာ မို့ အနာဂါတ် ကတော့ စောင့်ကြည့်ချင်စရာ ကောင်းလို့ နေပါပြီ။
The post အမေရိက ဈေးကွက် အတွင်း ရောက်ရှိလာဖို့ တွေဝေနေရပြီဖြစ်သည့် Peugeot ! appeared first on MyCars Myanmar.
MyMedia Myanmar2021-01-20T19:00:40+06:30January 20th, 2021|MYCARS MYANMAR|